မအလ အမေရိကန်နဲ့ မလေးရှားကို သံ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရဲလား? - Myanmar Globe
မအလ အမေရိကန်နဲ့ မလေးရှားကို သံ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရဲလား?
အမေရိကန်မှာ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို သံတမန်လုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ အလေးထားဆက်ဆံတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန် ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်က တရားဝင် ပေါ်တင်တွေ့တာပါ။ ဒါဟာ မအလကို ပါးရိုက်လိုက်တာပါ။ မအလအနေနဲ့ ဘာဆက်လုပ်မလဲ?
ပထမအနေနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ သံတမန်အဆက်အသွယ်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ သူတို့ကို နှင်ထုတ်တာမျိုးပါ။ ဒါမျိုးလုပ်ရင်တော့ သူ့တပ်ထဲမှာ အဘက ပြတ်သားတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမားရေးသမားတွေကြား ပုံရိပ်တက်သွားမှာပါ။ ဆိုးကျိုးက အမေရိကန်က စိတ်ဆိုးပြီး NUG ကို လက်နက်ထောက်ပံ့လာနိုင်တာပါ။ စာရေးသူတို့မှာ သူဘာရွေးရွေး အရှုံးမရှိပါ။
ဒုတိယလမ်းက ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်ခံတာပါ။ ငြိမ်ခံပြီး စာထုတ်တာလောက်ဆိုရင် တပ်ထဲနဲ့ အမျိုးသားရေးသမားတွေကြား သူက အကြမ်းဖက်လို့ ကြေညာထားတဲ့ NUG က ဝန်ကြီးကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လိုကြိုပြီးလက်ခံတွေ့ဆုံတာကို အကြမ်းဖက်မှု ဥပဒေအရ အမေရိကန်ကို ဘာမှအရေးမယူနိုင် အရေးမယူရဲလို့ ငပေါကြီး ဖြစ်သွားမှာပါ။ အရေးမယူရဲမှန်းသိရင် အမေရိကန်တင်မဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံတွေကပါ ပိုပြီး NUG နဲ့ တက်ဆံလာမှာပါ။ ဘယ်လမ်းရွေးရွေး စာရေးသူတို့ ဒီမိုတွေမှာ အရှုံးမရှိပါ။
နောက်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလဲ ဒေါ်ဇင်မာအောင်နဲ့ တွေ့မှာမိုလို့ သူ့ကိုရော အရေးယူရဲမလား ကြည့်ရပါမယ်။ သူ့ကိုလဲ ဘာလုပ်လုပ် အမေရိကန်လိုဘဲ စာရေးသူတို့မှာ အရှုံးမရှိပါ။ နိုင်ငံခြားရေး စာမျက်မှာက စာရေးသူတို့လိုချင်သလောက် တိုးတက်မှု မရသေးပေမယ့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကထက်စာရင် တိုးတက်မှုဟာ အင်မတန်မြန်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ တစ်နှစ်သားခြေလှမ်းက သွက်ပါတယ်။ ထ တော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးပါ။
နောက်ဆုံးကတော့ ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိပြီး မြန်မာပြည်သားတွေက ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။ ပြည်သူသာ အဓိကပါ။
မအလ အမရေိကနျနဲ့ မလေးရှားကို သံ အဆကျအသှယျဖွတျရဲလား?
အမရေိကနျမှာ NUG နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးကို သံတမနျလုံခွုံရေးအပွညျ့နဲ့ အလေးထားဆကျဆံတာ တှရေ့ပါတယျ။ အမရေိကနျ ဒုနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးကိုယျတိုငျက တရားဝငျ ပျေါတငျတှတေ့ာပါ။ ဒါဟာ မအလကို ပါးရိုကျလိုကျတာပါ။ မအလအနနေဲ့ ဘာဆကျလုပျမလဲ?
ပထမအနနေဲ့ အမရေိကနျနဲ့ သံတမနျအဆကျအသှယျဖွတျလို့ရပါတယျ။ သူတို့ကို နှငျထုတျတာမြိုးပါ။ ဒါမြိုးလုပျရငျတော့ သူ့တပျထဲမှာ အဘက ပွတျသားတယျဆိုပွီး နာမညျကွီးသှားနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမားရေးသမားတှကွေား ပုံရိပျတကျသှားမှာပါ။ ဆိုးကြိုးက အမရေိကနျက စိတျဆိုးပွီး NUG ကို လကျနကျထောကျပံ့လာနိုငျတာပါ။ စာရေးသူတို့မှာ သူဘာရှေးရှေး အရှုံးမရှိပါ။
ဒုတိယလမျးက ဘာမှမလုပျဘဲ ငွိမျခံတာပါ။ ငွိမျခံပွီး စာထုတျတာလောကျဆိုရငျ တပျထဲနဲ့ အမြိုးသားရေးသမားတှကွေား သူက အကွမျးဖကျလို့ ကွညောထားတဲ့ NUG က ဝနျကွီးကို နိုငျငံခေါငျးဆောငျလိုကွိုပွီးလကျခံတှဆေုံ့တာကို အကွမျးဖကျမှု ဥပဒအေရ အမရေိကနျကို ဘာမှအရေးမယူနိုငျ အရေးမယူရဲလို့ ငပေါကွီး ဖွဈသှားမှာပါ။ အရေးမယူရဲမှနျးသိရငျ အမရေိကနျတငျမဟုတျဘဲ အခွားနိုငျငံတှကေပါ ပိုပွီး NUG နဲ့ တကျဆံလာမှာပါ။ ဘယျလမျးရှေးရှေး စာရေးသူတို့ ဒီမိုတှမှော အရှုံးမရှိပါ။
နောကျပွီး မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးကလဲ ဒျေါဇငျမာအောငျနဲ့ တှမှေ့ာမိုလို့ သူ့ကိုရော အရေးယူရဲမလား ကွညျ့ရပါမယျ။ သူ့ကိုလဲ ဘာလုပျလုပျ အမရေိကနျလိုဘဲ စာရေးသူတို့မှာ အရှုံးမရှိပါ။ နိုငျငံခွားရေး စာမကျြမှာက စာရေးသူတို့လိုခငျြသလောကျ တိုးတကျမှု မရသေးပမေယျ့ ၁၉၉၀ ပွညျ့လှနျနှဈတှကေထကျစာရငျ တိုးတကျမှုဟာ အငျမတနျမွနျပါတယျ။ NUG ရဲ့ တဈနှဈသားခွလှေမျးက သှကျပါတယျ။ ထ တော့ လမျးမလြှောကျနိုငျသေးပါ။
နောကျဆုံးကတော့ ပွညျ့အငျအားသညျ ပွညျတှငျးမှာသာရှိပွီး မွနျမာပွညျသားတှကေ ဆုံးဖွတျသှားမှာပါ။ ပွညျသူသာ အဓိကပါ။
ဘေထုပ် အထည်ဟောင်းရောင်းပြီး အိမ်ဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းသူလေး
အာဏာသိမ်းမယ့် အချိန်မှာ တွက်ချက်မှု အမှားအယွင်း ၂ ခု လုပ်မိခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်